100 years Myanmar Women Fashion - Yangon Thu Michelle Video
Video, Women Empowerment Aug 31, 2018
ကြည့်ရုံနဲ့ ဘယ်ခေတ်ဘယ်ဖက်ရှင်ခေတ်စားလဲ မှန်းလို့ရမှာပါ။ ပညာရှင်တွေရဲ့ စုပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုနဲ့ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေရဲ့ အားပေးကူညီမှုကြောင့်ဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။
လုပ်ရတဲ့ ရည်ရွှယ်ချက်က Youtube နဲ့ အင်တာနက်မှာ 100 years fashion လို့ရှာလိုက်ရင် နိုင်ငံတိုင်းရဲ့ ဖက်ရှင်တွေ ဝေဝေဆာဆာတွေ့ရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဗီဒီယိုမရှိသေးသလို ဘယ်သူကမှ မလုပ်ကြသေးတော့ မခံနိုင်ဖြစ်ပြီး Yangon Thu Michelle – ရန်ကုန်သူမီရှဲကတတ်နိုင်တဲ့ဘောင်အတွင်းကနေ ဒီ 100 years Myanmar Women Fashion ကို လုပ်ထားပါတယ်။
အားလုံးပဲ ကြည့်ရင်း ပျော်ရွှင်ပါစေနော် ….
ပုံတွေ စာတွေ စစုတုန်းက သိလိုသမျှပြောပြပေးတဲ့ အပြင် ရှိသမျှကို မတွန့်မဆုတ်ဝေမျှပေးတဲ့ ကို Kyaw Maung Maung Htut။ Lin San Tyna သူတင်သမျှပုံတွေထဲက လေ့လာရတယ်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်များ ဗဟိုစာကြည့်တိုက်က စာအုပ်တွေကို လိုအပ်သလို ပေးကြည့်တဲ့ တာဝန်ရှိသူများ။ ပုံတွေ ခေတ်အလိုက်ခွဲပေးတဲ့ MoMo Win Tin နဲ့ မိုမို့အဘွား။ သိသမျှပြောပြပေးတဲ့ မန်းလေးက မိတ်ကပ် DaungDaung DaungDaung။ အဝတ်အစားနဲ့ လက်ကိုင်အိတ်တွေကို ပုသိမ်ကနေ တကူးတကယူပေးတဲ့ မ Olive Oyll Make-up Artistry ။ အမေ့အင်္ကျီနဲ့ ထမီတွေ ယူလာပေးတဲ့ မ Saw Thinzar Htaik ။ illustration တွေကို စိတ်တိုင်းမကျမချင်းဆွဲပေး လိုတာတွေကူရှာပေး အင်္ကျီတွေကို စိတ်နှစ်ပြီးသေသေချာချာချုပ်ပေးတဲ့ Li Ying styling လဲသူပဲ။ မေစံပယ်ရေ … ဒါတွေ ဒါတွေလိုတယ် လုပ်ပေး ဒီလိုလိုချင်တယ်ဆိုတာနဲ့ သတိပေးစရာမလိုအောင် အစအဆုံး ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ မိတ်ကပ် Mayzabae Nyo။ ဒီလိုရိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့ ရိုက်မယ့်အိုင်ဒီယာ ဘယ်လိုရိုက်မယ်ဆိုတာအစအဆုံးစဉ်းစားပြီးသား ဖြစ်နေတဲ့ ကိုဖြိုးမင်းမြတ် Phyo Min Myat Like Art Creation ။ အသံအတွက် လိုက်ဖက်မယ့် တီးလုံး ပြန်တီးပေးတဲ့ ကိုသားငယ် Hein Htet Aung ။ ရုပ်ရှင်ခေတ်က ပိုစတာတွေ စာအုပ်တွေလိုတာပေးတဲ့ ဦးမျိုးဆွေသန်း။ ဒီ ဗီဒီယိုအစအဆုံးဖြစ်လာအောင် ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ပေးတဲ့ IDEA LIVE Production ။ ဘာလုပ်လုပ်အမြဲ အားပေးကူညီပေးတဲ့ ချစ်သူ Nyi Min San နဲ့ အားပေးကူညီပေးကြတဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
Clothing in Myanmar varies depending on the ethnicity, geography, climate and cultural traditions of the people of each region of Myanmar (Burma). Let watch this video to know the Myanmar’s Fashion during 100 years.